Printsy Georges, Elle Fanning… ankizy manan-karena indrindra eran-tany
Kenny Rogers,: nodimandry ilay mpanjakan’ny « Country »
Ilay hira « Lady » izay nindramin’i Lionel Ritchie, taty aoriana, no tena ahafantarana an’i Kenny Rogers. Ilay hira mitondra ny lohanteny hoe « Lucille » no nampiakatra ny lazany, tany amin’ny taona 1977.
Andie MacDowell : 61 taona …inona no mampafatifaty azy?
Mahafatifaty ity mpilalao sarimihetsika ity na efa 61 taona aza. Mitantara ny fomba fikoloany endrika amam-bika izy. 1. Mpifoha maraina
Andie MacDowell : tokony ho rehareha ny taona, hoy izy
Mahafatifaty ity mpilalao sarimihetsika ity na efa 61 taona aza. Mitantara ny fomba fikoloany endrika amam-bika izy.
Coronavirus : 20 mahery ireo olo-malaza voany
Tsy mifidy ny valan’aretina « coronavirus » fa na olona tsy eritreretina ho voany aza dia tratrany avokoa.
Katy Perry : miantsehatra na mitoe-jaza aza
Tsy karazan’ireo vehivavy mitoe-jaza dia mipetrapetraka tsara any an-trano miandry ny fotoana ahaterahana ilay mpihira Katy Perry. Niakatra an-tsehatra mantsy izy,
Taylor Swift : Nahalafo CD betsaka indrindra tamin’ny 2019
Tonga eo amin’ny laharana voalohany maneran-tany amin’ny famarotana kapila, tamin’iny taona 2019 iny, ilay mpihira amerikanina, Taylor Swift.
Ireo mpanakanto malaza noho ny solomaso hanaovany
Sokajiana ho kojakoja manampy amin’ny haingo izay hanaovana ny solomaso na ilay tsy maintsy hanaovana vokatry ny areti-maso na ilay « zesta » fotsiny.
Vintana sa anjara ny an’ireto ankizy ireto fa mbola vao kely izy ireo dia efa manan-karem-be. Ny tsy azo lavina kosa aloha dia nifofotra ny sasany amin’izy ireo vao tafita na tsy mahakasika ny zanaky ny printsy loatra aza izay tranga izay.
1. Jaylen Bledsoe
Mbola vao 13 taona monja izy dia efa nanomboka nanokatra ny orinasany mifototra amin’ny resaka informatika. Teo amin’ny faha-15 taona izy no nanomboka nandray vola an-tapitrisany. Amin’izao izy efa mahatratra 3,5 tapitrisa dolara ny vola any amin’ny kaontiny.
Nanomboka tamin’ny taona 2002 izy no niditra teo amin’ny sehatry ny filalaovana sarimihetsika. Vao 17 taona izy dia nahatratra 5 tapitrisa dolara ny vola niditra taminy. Indraindray izy milalao miaraka amin’ny rahavaviny ary efa mihoatra ny 21 tapitrisa dolara any ny vola any amin’ny kaontin’izy mirahavavy
Mpanao informatika sy mpandraharaha britanika izy. Teo amin’ny faha-15 taonany izy no nanangana ny « Summly », application ho an’ny finday entina hamintinana someso fa mitazona ny dikan’ireo farany ireo ihany. Namidiny tamin’ny Yahoo io « application » io ka nahazoany 30 tapitrisa dolara. Efa 22 taona izy amin’izao fotoana ary mbola manohy fianarana ao Oxford
4. Printsy Georges
Ity zanaky ny printsy William sy Kate Middleton ity no mpanan-karena indrindra eran-tany, raha ny sokajin’ny ankizy no jerena. Mbola vao 5 taona izy fa efa manana miliara. Ankoatra izay dia izy no fahatelo handova ny fanjakana ao Grande Bretagne.